Ny 10 Microsoft Training Cours dia hanova ny fomba fihevitrao NY
"Isika dia mitsara ny namantsika any amin'ny indostria, ary mieritreritra aho fa [fomba fijerin'i Microsoft] dia fomba mahavariana hampiseho ny fahamendrehana amin'ny fahamendrehana eo amin'ny fahaiza-manao anananao, ary hampiseho amin'ny olona hafa fa manana ny zavatra ilaina ianao mba handray ny tsirairay dingana ilaina. Ny sasany amin'ny Microsoft Training & Certification dia ireto manaraka ireto:
Windows Azure Solutions amin'ny Microsoft Visual Studio 2010
Serasera amin'ny Microsoft Windows server 2012
SQL Server Data Server an'ny Microsoft SQL
Microsoft Exchange Server Administrator sy Security
1. Windows® Azure ™ Solutions amin'ny Microsoft® Visual Studio® 2010
Rehefa vita izany
2. Hanomboka amin'ny VBA amin'ny Excel 2010
Nahoana no mampiasa VBA amin'ny Excel 2010?
3. Windows Server 2016 Fanofanana: Networking
4. Fenon'ny Windows Server Administration: MTA Exam 98-365
5. System Center 2012 Orkestrator
6. SQL Server Data Server an'ny Microsoft SQL
9. Microsoft Exchange Server Administrator sy Security
10. Fanofanana Microsoft Exchange Server 2013
Ity fampiofanana momba ny Microsoft & Certification ity dia soso-kevitra hanapariahana ny informatika ary indrindra indrindra ny atolotra Microsoft amin'ny Windows Azure. Windows Azure dia naseho an'i Microsoft ho rafitra fiasana ho an'ny "cloud". Amin'ity kilasy ity, mamakafaka ny raharaham-barotra rahona ianao ary mamantatra ny fomba hanangonana, fampitaovana ary ny fampiratiana ny APET. Azure ao Azure.
Ity kilasy ity dia natao ho an'ny mpikirakira .NET miaraka amin'ny fihaonana amin'ny rindrambaiko web izay manadihady ny fampiharana ny fampiharana vaovao na ny famoahana ireo fampiharana efa misy any amin'ny Windows Azure
Manaporofo ny fizarana ny fizarana amin'ny rafitra samihafa sy ny fomba ahazoan'ny Windows Azure amin'ny sehatra fizarazarana.
Fantaro hoe nahoana ny fikambanana dia mila mandefa fampiharana ao amin'ny rahona Azure.
Ahitsio ny famoronana ny Azure.
Diniho ny SDK Azure sy ny manodidina ny fanatsarana (Mpanitsy sy mpanodina).
Fantaro ny fomba famoronana fangatahana azure ary ny fomba fiovana avy amin'ny "fomba mahazatra".
Mampiditra sy mampita ASP.NET tranonkala ASP.NET (Web Role) mankany Azure.
Asehoy ny fomba fanatanterahana sy fampitana ny fampiharana fampiharana fototra (Worker Role) ao Azure.
Fantaro ny fahafaha-mitahiry azonao atao mba hampidirana ny tahirin-tsakafon'ny latabatra, ny tsipika sy ny blob.
Diniho ny SQL Azure, ny tambajotra sosialy ao amin'ny rahona.
Eritrereto ny fomba fiasan'ny SQL Azure amin'ny alàlan'ny Azure Storage.
Manolotra Visual Basic for Applications (VBA) ao amin'ny Excel 2010 ho an'ny mpanjifa Control Excel izay tsy mbola mpanatontosa rindrambaiko. Ity lahatsoratra ity dia ahitana rindran-damina amin'ny fiteny VBA, fitsipika momba ny fomba tsara indrindra hahatongavana amin'ny VBA ao amin'ny Excel 2010, teboka iray amin'ny fanazavana ny valiny ho an'ny tena programana Excel VBA, ary toro-hevitra momba ny fandaharana sy ny fanadihadiana. Nahoana no mampiasa VBA amin'ny Excel 2010?
Microsoft Excel 2010 dia fitaovana tena mahavariana azonao ampiasaina mba hifehezana, hamantatra, ary hampiseho vaovao. Amin'ny toe-javatra sasany, na dia eo aza ny rafitra mpanangom-bokatra ao amin'ny Excel (UI), mety mila mitady fomba fohy tsy dia ilaina loatra ianao mba hizaha andraikitra tsy dia hentitra loatra, na tsy misy dikany firy ny UI miseho amin'ny adiresy. Soa ihany, ny fampiharana ny Office tahaka ny Excel dia manana Visual Basic for Applications (VBA), fitenenana fandaharam-pampianarana izay manome anao ny fahafahana hampitombo ireo fangatahana ireo.
Ny VBA dia miasa amin'ny alàlan'ny famokarana macros, fomba amam-pitondran-tena tsara voasoratra ao amin'ny Visual Basic. Ny famaritana ny fomba fandaharam-potoana dia toa mampihorohoro, kanefa amin'ny fikirizana sasany sy ny fanoharana vitsivitsy, ohatra, ireo ato amin'ity lahatsoratra ity, mpanjifa maro no mihevitra fa ny fampifanarahana na dia kely fotsiny ny fehezan-dalàna VBA dia mahatonga ny asany tsy dia mitaky loatra ary manome azy ireo Ny fahafaha-manao ny zavatra natao tao amin'ny Birao izay tsy ninoany dia azo eritreretina. Rehefa nampifanaraka ny VBA sasany ianao, dia lasa mora kokoa ny maka an-katezerana bebe kokoa-ka tsy misy fetrany ny vokatra azo raisina eto.
Amin'ny fisian'ny lava lava dia ny antony tena ankasitrahan'ny VBA amin'ny Excel dia ny hamolavola ireo orinasa madinidinika. Ohatra, mihevi-tena fa manana boky torolàlana am-polony tapitrisa ianao, izay samy manana karazany roa ambiny folo, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia mila fiovana vitsivitsy. Ny fivoarana dia mety ho tsotra tahaka ny fampiharana ny fananganana vaovao amin'ny efi-tranokalam-pandaminana sasany na koa ny eritreritr'izy ireo toy ny manangom-bokatra amin'ny toetoetran'ny zava-misy ao amin'ny teboka rehetra, ny fisafidianana ny karazana tsara indrindra mba hampisehoana ny mombamomba ireo toetra ireo, ary aorian'ny Ny famolavolana sy fandaminana ny diagram amin'ny fomba toy izany.
Na ahoana na ahoana, dia tsy tokony hilalao an-tsehatra ireo fitsaboana ara-batana ianao, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Azonao atao ny manamboatra ny fitadiavana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny VBA mba hananganana torolalana tsy azo antoka ho an'ny Excel mba haka izany.
Ny VBA dia tsy natao fotsiny ho an'ny fikarakarana maivana. Azonao ampiasaina koa ny VBA mba hampidirana ireo fahaiza-manao vaovao miaraka amin'ny Excel (ohatra, azonao atao ny mamorona kaonty vaovao hanadihadiana ny mombamomba anao, ary ampiasao ny kapila azo ampiasaina ao amin'ny Excel mba hampisehoana ny vokatra), ary hanatanterahana ny fandrindrana mifandraika amin'ny Excel amin'ny Office Office hafa, ohatra, Microsoft Access 2010. Raha ny marina, ny momba ny fampiharana Office rehetra, Excel no iray ampiasaina indrindra ho zavatra iray maka aorian'ny dingana fanatsarana ankapobeny. Na dia eo aza ny fananganana antontan-kevitra rehetra, izay ahitana rakitsoratra sy bokim-bola, ireo mpandraharaha dia mampiasa Excel amin'ny sehatr'ireo fitantanana amin'ny fomba fijery ny fampahalalana momba ny programa.
Na inona na inona ankamaroan'ny fanentanana lehibe hampiasana ny VBA ao amin'ny Excel 2010, tsarovy fa ny valiny tsara indrindra ho an'ny olana dia tsy midika hoe ny VBA amin'ny fomba rehetra. Ny fandaniana fanantenana dia manana vahaolana goavana amin'ny singa na dia tsy misy VBA aza, hany ka na ny mpanjifany amin'ny hery aza dia mety tsy ho fantatry ny rehetra. Alohan'ny hametrahana fandaharan'asa VBA, dia jereo ny fanampiana sy ny fitaovana an-tserasera amin'ny ankapobeny mba hiantohana fa tsy misy fomba mora kokoa.
Windows Server 2016 dia manolotra singa vaovao sy fahaiza-manaon'ny fitantanana vaovao izay mampihena ny fampiroboroboana ny karazam-bolo maro amin'ny fametrahana ny fandaniana sy ny famoahana ny fitantanana ny fitantanana. Ireo singa ireo dia:
- Adiresy IP adiresy (IPAM). Izany dia manome rafitra iray manome hery ny fanambarana, ny fitantanana ary ny fanamarinana ny efamira adiresy IP ao anatin'ny rafitry ny fikambanana.
- Hyper-V Network Virtualization. Ity no vokatra manavaka ny fandaminana (SDN) izay manome hery anao hiatrehana ireo fanamby ho an'ny mpampifana aterineto amin'ny alàlan'ny fanalana ny adiresy IP (VM) virtoaly avy amin'ny fotodrafitrasa fototra miompana amin'ny fitarihana, toy ny làlan-kodiavin'ny VMs amin'ny fitaovana ny mpampiantrano.
- Hyper-V fanitarana. Izany dia manome endrika hametrahana ny fepetra takian'ny fandaharam-potoana ho an'ny filaminana, seclusion, ny tombon-tsoa, ​​ary ny fialan'ny mponina.
- Ny ekipan'ny NIC. Avy ao amin'ilay fitahirizana fikarakarana ny karatra interface (NIC) dia ny fahafahana hanamafy orinasa roa farafahakeliny ao anaty solosaina tokana mba hitazonana azy ho solika NIC ao anatin'ny Windows.
Ity fampiofanana MTA ity dia manampy anao hamolavola ny Microsoft Technology Associate Exam 98-365, ary manamboatra ny fahatakarana ireo lohahevitra ireo: Fanaraha-maso Server, Role Server, Active Directory, Storage, Server Performance Management, ary Seranana Maintenance. Ity làlana ity dia misy fiantraikany amin'ny zavatra tsy azo lavina hita ao amin'ny Microsoft Academic Course (MOAC) amin'ity fanadinana ity.
Ny Microsoft Technology Associate (MTA) dia ny fametrahana fandaharam-pahaizana vaovao momba ny fanavaozana ny Microsoft izay mandroso ny fianarana manan-danja hanombohana fananganana fiantsoana mampiasa fampandrosoana an'i Microsoft. Ity fandaharam-potoana ity dia manome andalan-tsoratra mety ho fanehoana asa amin'ny ho avy amin'ny fanavaozana ary manantena ny fandraisana andraikitra an-telefaona na fanomanana azy saingy tsy ekeny amin'ny fahatakaran'ny asa.
Famerenana ny fametrahana server
Mpandraharaha Server an'ny Comprehend
Ampitahao Active Directory
Mpampiasa Performance Performance Comprehend
Ity fampiofanana Microsoft Training & Certification ity dia manome fahatakarana ny fianarana manan-danja amin'ny fametrahana, mandefa, ary manohy ny Microsoft Center 2012 Orchestrator. Amin'ity andalana ity, ny fahatakaran-javatra dia mifankahafantatra amin'ireo singa System Center, ary avy eo dia maminavina hoe ahoana no ahafantarana ny Orchestrator 2012 ary alefany ao anatin'ny sehatry ny Systems Center. Ankoatr'izany, io fandaharam-pianarana io dia ahafahana manamboatra fepetra mikendry ny hiatrehana toe-javatra samihafa, izay mety hiaina amin'ny tontolo iainana ara-barotra. Eo am-piandohana, ny tsipiriany dia hanana izay zava-dehibe tokony hanaraha-maso ny Orchestrator 2012 noho ny tombontsoa azo avy amin'ny orinasa goavana indrindra. Ity fampianarana ity dia manatsara ny fisokafan'ny fianarana, ka noho izany, ny tsikombakomba dia afaka miasa amin'ny fampiharana vahaolana raharaham-barotra amin'ny toe-javatra tena izy.
Ity fampiofanana Microsoft Training & Certification ity dia natokana ho an'ny manam-pahaizana IT izay efa manana fahalalana manokana momba ny rafitra mila ampanaovina azy ireo amin'ny Orchestrator 2012 .. Ity laha-tahiry ity koa dia ho an'ny manam-pahaizana IT izay mila mahazo ny ampahany fototra amin'ny rafitra izay mety hitaky fampirimana.
Hazavao ny ampahany amin'ny Orchestrator 2012 sy ny Suite System manontolo
Omeo ny famerenana ny ITIL sy ny MOF
Mampidira sy mandamina mpikarakara 2012
Hanamboatra, manalefaka ary manoritra Orchestrator 2012
Hamoaka ny famandrihana amin'ny bokotra Windows Windows
Manamboà bokotra efa mandroso amin'ny fampiasana toe-javatra azo antoka
Manaova kitapo fanangonana ho an'ny System Center sy Microsoft hafa
Manaova famolavolana fahadisoana mikarakara sy manara-maso
Manaova teknikam-pangorahana loza
Manaova tetezamita sy manadihady ny orinasa Orchestrator 2012
Ny fiantsenan'ny MCSE SQL Server 2014 Data Platform dia mamela ireo manam-pahaizana IT hanamboatra sy hanohy ny orinasa lehibe eo amin'ny raharaham-barotra rahona na ny vahaolana momba ny fampahalalana an-tserasera. Ity lalambe ity dia tonga lafatra amin'ny mpiandraikitra ny banky izay miandraikitra ny famolavolana sy ny fanaraha-maso ny tahiry amin'ny toe-draharaha lehibe. Ny mari-pankasitrahana MCSE amin'ny fampandrosoana ny fampahalalam-baovao dia ahafahan'ny mpikambana mametraka fikarakarana sy mamaritra ny rafitra momba ny fandraketana daty, anisan'izany ny fahafaha-manao, ny lahatsoratra ary ny server.
Ireo mpikambana voafantina amin'ity andiany ity dia handrakotra ireo fomba fijery etsy ambany ao amin'ity programa fanomanana SQL Server 2014 ity:
Ny fametrahana, famolavolana, fampahafantarana, ary fitazonana databases amin'ny fikasana Microsoft natsangana
Famoahana sy fanadihadiana ny hetsi-panoheran'ny SQL Server
Fanontaniana amin'ny Server SQL 2014
Mitantana ny toe-javatra ofisialin'ny SQL Server 2014
Ny fanatanterahana ny foibe fanapariahana ny vaovao amin'ny server SQL 2014
Famaritana vahaolana amin'ny tahiry SQL 2014
Ity fampiofanana Microsoft Training & Certification amin'ny endriny farany amin'ny Microsoft SQL Server ity dia hanampy ny manam-pahaizana hanatsara ny fahafaha-manao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanaraha-maso ny vahaolana momba ny fampahalalam-baovao sy ny toe-javatra momba ny tambajotra.
Ny vondrona mpitsidika ho an'ity fianarana ity dia database sy mpikaroka momba ny orinasa (BI) izay mahafantatra momba ny SQL Server 2008 ary mila manatsara ny fahaiza-manaony ao amin'ny SQL Server 2014, ary mahazo aina amin'ny fandrosoana vaovao momba ny Microsoft.
Ny torolàlana momba ny famolavolan'ny Microsoft Office 365 ho an'ny orinasa dia manolotra rafitra mavesa-danja handaminana ny rafitra momba ny hevitra sy ny rafitra. Ny fanampim-panafahana dia alefa any amin'ireo faritra izay manome tahirin-kevitra manokana amin'ny karazana fampiofanana manokana ao amin'ny fikambananareo.
Ity misy sombin-tsakafo haingana izay ho hitanao:
Segment deployment de déplacement. Ity fitaovana ity dia manome ny fanjakana tsy voajanahary mitarika ny rafitra sy ny fepetra fanamafisana mba handefasana Office 365. Manana angon-drakitra mahasoa ho an'ny loham-pahefana IT, talen'ny programa, ary fitarihana famonoana manokana.
Manomàna sy manomana segondra. Ireo sehatra ireo dia maneho ireo andraikitra manokana sy ny fampiharana ilaina mba hanomanana sy hanatanteraka tanteraka ny fandaharam-potoan'ny Office 365. Ny fandraisana andraikitra dia ampahany betsaka indrindra amin'ny fangatahana anoratana azy ireo ao anatin'ny fandaharanao. Ny lohahevitra niresahana tao amin'ny faritra misy ny Plan dia ny ampahany betsaka amin'ny fiverenana amin'ny sehatra Prepare miaraka amin'ny toro-lalana hanaovana ny asa. Ny drafitra sy ny fanomanana ny faritra dia ahitana votoaty izay manintona manokana ireo karazana fanavaozana manokana ao amin'ny fikambanana.
Manjono segondra. Ity faritra ity dia maneho ireo fitarihana amin'ny famindrana ireo taratasin-tsoratra taratasin-tsakafo ho an'ny tolotra Office 365 mba ahafahanao manomboka amin'ny fampiasana ny Office 365 ho toy ny endriky ny manodidina ny famoronana anao.
Ity fampiofanana momba ny fiofanana sy ny Certification Microsoft dia manazava ny fomba hanoratana sy handaminana ny feon'ny firesahana ao amin'ny Microsoft Lync Server 2013 sy ny Lync Online administrations. Ity fampianarana ity dia hanome anao ny fampahalalana sy ny fahaiza-manao hanamboatra sy hifampiraharaha amin'ny Lync Server 2013 eo amin'ny trano, Lync Online ao anaty rahona na ao anatin'ny fikambanana mifangaro. Ankoatr'izay dia hanome ny fahaiza-manaon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny IT sy ny serasera izy mba hampitaovana fandaharana fehezanteny Lync. Ity fampianarana ity dia hampiseho anao ny fomba hanamboarana Lync Server 2013, ary manome fitsipika, fomba fanao tsara ary fandinihana izay hanampy anao hampamirapiratra ny fandaharam-potoan'ny feo. Ity fampianarana ity dia manampy ny fahatarana ho vonona amin'ny Exam 70-337.
Ity fampiofanana momba ny fiofanana Microsoft & Fepetra momba ny fanofanana ity dia andrasana ho an'ny mpanolo-tsaina IT consultants sy télécommunications manam-pahaizana manandanja manam-pahaizana manokana izay ahitana latsaky ny telon-telo volana izay mamintina, manamboatra, mandefa ary mitazona vahaolana ho an'ny fifampiraharahana (UC) miaraka amin'ny fifehezana manokana amin'ny feo lehibe momba ny fivoaran'ny Internet (VOIP). Ny fahatarana dia tokony hanana fahafahana handika ny fitsipika momba ny raharaham-barotra ho amin'ny sehatra manokana ary hanomana ny rafitra UC. Ny fahatarana dia tokony manana koa ny Windows Server 2012 fitaratra.
Manofahofa feon-kira mihetsiketsika
Manaova drafitra sy mandamina handrindra ny fitantanana ny Lync 2013
Manamboara singa feo avy amin'ny Lync Server 2013
Hamarino ny fitantanan-draharahan'ny feo krizy
Manaova ary manamboara Lync Online na fifanarahana milamina
Ny fampiofanana Microsoft sy ny Certification amin'ny Exchange Server Administration sy Security dia hampianatra momba ny fitantanana sy ny famolavolan'ny Microsoft Exchange Server 2013 amin'ny fomba tsotra. Ny Trade 2013 dia dingana iray avy amin'i Microsoft izay manome vahaolana amin'ny biletà taratasy, famandrihana ary ny karazana fitaovana isan-karazany mba hampahafantarana ny fangatahana sy ny ezaka fandrindrana. Ny mpikambana dia hahazo fampahafantarana goavana amin'ny fametrahana, fanaraha-maso ary fanaraha-maso ny tranokala MS Exchange, ohatra, ny takelaka post, ny mpanjifa ary ny fitaterana hafatra. Symantec Mail Security ho an'ny MS Exchange dia mamela ny Symantec Antivirus hanomezana antoka ny mailaka amin'ny spyware, phishing, ny aretina ary ny fanafihana hafa feno fahatezerana raha manome alalana ny tetikasa fanivanana ao amin'ny Exchange Server. Ny Symantec Security dia ankoatra ny mônalin'ny Symantec Protection Suite izay manome ny sarin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny loza ateraky ny mailaka ary toy ny andalana voalohan'ny fiarovana amin'ny loza raha toa ka misy tranganà fahadisoam-panantenana sy mailaka. Symantec Anti Security no manosika ny Symantec AntiSpam, mifehy ny fanavaozana Brightmail, mba hanakanana ny ankamaroan'ny spam.
Ny fanangonana ny olona ho an'ity dingana ity dia ny manam-pahaizana momba ny Teknolojia momba ny Teknolojia (IT) izay miezaka ny miezaka mitory amin'ny mpanatanteraka. Ireo olon-kafa izay mety handray ity sehatra ity dia hampiditra ireo mpanolotsaina IT ary hanampy ireo manam-pahaizana momba ny asa izay mila mahafantatra momba ny Exchange Server 2013. Ny lohan'ny fianarana dia miankina amin'ny fananana traikefa mandritra ny taona 3 miasa ao amin'ny sehatry ny IT - amin'ny ankapobeny ao amin'ny faritry ny fandaminana ny rafitra, ny fanampiana ny sehatry ny asa, na ny fandaminana rafitra. Tsy voamarina fa mety ho tafiditra amin'ny endrika Exchange Server taloha Ny famoriam-bola fanampiana ho an'ny olona amin'ity sehatra ity dia manam-pahaizana izay manantena ny handray ny fanadinana 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions, amin'ny maha-izy azy, na amin'ny maha-lehibe azy lafiny amin'ny fepetra ilaina amin'ny MCSE: Ny mari-pankasitrahana Microsoft Exchange Server 2013 dia handray ity dingana ity ho fitaovana fananganana drafitra.
Ity fampiofanana Microsoft & Certification ity dia hanome anao ny fianarana sy ny fahaiza-manao mba handaminana, handefa, hanara-maso, hiantohana ary hanohanana ny Microsoft Exchange Server 2013. Ity fampianarana ity dia hampiseho anao ny fomba handaminana ny Exchange Server 2013 ary hanome anao ny angona tokony aloanao, manohy ary manadihady Exchange Server 2013. Ity fampianarana ity koa dia hanome fitsipika, fomba fanao tsara ary fitsapan-kevitra izay hanampy anao hampitombo ny famonoana sy hampihenana ny fahadisoana sy ny loza amin'ny fiarovana amin'ny Exchange Server 2013.
Alefaso ary ovay ny Exchange Server 2013.
Amboary ary ambarao ny ampahany amin'ny serivisy Mailbox.
Oversee lahatsoratra mpandray tombony, adiresy adiresy ary adiresy adiresy ao amin'ny Exchange Server 2013.
Manaova drafitra sy manatanteraka ny serivisy Client Access amin'ny Exchange Server 2013.
Manaova fanaraha-maso amim-pitandremana sy mamolavola ny Microsoft Outlook Web App ary azo ampiharina amin'ny fampiasana ny Client Access
Manafaha ary manara-maso ny fidirana amin'ny serivisy Client Access amin'ny Exchange Sever 2013.
Miomàna hiatrika ny faharetan'ny loza, manatanteraka ny fanamafisana sy ny fialana amin'ny Exchange Server 2013.
Manangona sy mamorona hafatra fitaterana ao amin'ny fikambanana Exchange Server 2013.
Amboary ny safidy safidin'ny hafatra, hamaha ny vahaolana ho an'ny antibiôtika, ary manamboatra fepetra mifanohitra amin'ny spam.
Manaova fanekena ary miantoka ny Exchange Server 2013.
Mijoroa, tadidio, ary diniho ny tontolo manodidina Exchange 2013.
Ny vahoaka manan-danja amin'ity sehatra ity dia manam-pahaizana momba ny Teknolojia momba ny Teknolojia (IT) izay mikasa ny hanamafy ny lanjan'ny filoha. Ireo olon-kafa izay mety handray ity sehatra ity dia hampiditra ireo mpanolotsaina IT ary hanampy ireo manam-pahaizana momba ny asa izay mila mahafantatra momba ny Exchange Server 2013. Ny tale lefitra miditra amin'ny fianarana dia mitaky ny fananana traikefa mandritra ny taona 3 miasa ao amin'ny sehatry ny IT - amin'ny ankapobeny ao amin'ny faritry ny fandaminana ny rafitra, manampy ny sehatry ny asa, na ny fandaminana rafitra. Tsy noheverina fa mety ho tafiditra amin'ny famoahana Exchange Server taloha.
Ny vondrona mpanampy mpitsidika amin'ity sehatra ity dia manam-pahaizana izay manantena ny handray ny fanadinana 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions, amin'ny endriny iray, na amin'ny maha-ampahany amin'ny fehezan-dalàna momba ny MCSE: Ny serivisy Microsoft Exchange Server 2013 Ataovy toy ny fitaovam-panomanana ny fianarana.